Don2(2011) | MM Movie Store
နာမညျကြျော ဘောလီးဝုဒျ မငျးသားကွီး ရှာရှတျခနျးပါဝငျရိုကျကူးထားတဲ့ Don 1 ရဲ.အဆကျပါ။ဒီဇာတျကားမှာတော့မငျးသားကွီး ရှရှတျခနျး နဲ့ မငျးသမီး Priyanka Chopra တို့အဓိက ပါဝငျထားပွီးအခွားသရုပျဆောငျမြားစှာ အားဖွညျ့ထားတဲ့ Bollywood Action ဇာတျကားပါ။
Action ခညျြးသကျသကျမဟုတျဘဲ ဇာတျလမျးသဘောအရလဲ ဖမျးစားထားနိုငျတာကွောငျ့ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ။IMDb Rating (7.1/10) ရရှိထားပါတယျ။
Don(2006) Box Office မှာ အကွီးအကယျြ အောငျမွငျပွီးနောကျ ဒါရိုကျတာဖာရနျအကျချသာဟာ (၂၀၀၇)မှာပဲ “Don Sequel “ကို ဆကျလကျရိုကျကူးမယျလို့ ကွငွောခဲ့ပါတယျ ။ဒါပမေဲ့ ကံဆိုးစှာပဲ ရှာရှတျပခုံးဒဏျရာ surgery လုပျရတာမို့ မရိုကျဖွဈပဲ အခြိနျတဈခုကို ထပျစောငျ့နခေဲ့ရတယျ ။
အခြိနျကွနျ့ကွာသှားပမေဲ့ ဒီ Cast ကိုပဲပွနျသုံးခဲ့ပွီး (Arjun Rample နဲ့ Ishaa Koppiker ကလှဲလို့) Lura Dutta ကိုတော့ ရှာရှတျမှ recommend လုပျတာကွောငျ့ ထညျ့သုံးကာ ၂၀၁၀ မှာ ရိုကျဖို့စတငျဖွဈခဲ့တယျ ။
၂၀၁၀ ဆိုတာ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး “My Name Is Khan” အတှကျ ဝိတျခလြှနျးမက ခထြားရလို့ သေးသေးပိနျပိနျလေးဖွဈနရေတဲ့အထဲ Surgery ထပျလုပျထားရပွနျတဲ့အခြိနျ ။
နောကျထပျတဈခုက ၂၀၁၁မှာ ရုံတငျတာက “Ra One “နဲ့ “Don -2”Ra One Robot Suit အတှကျ အဆငျပွအေောကျ ဝိတျခထြားတဲ့ ရှာရှတျဟာ ခှဲစိတျထားတဲ့ဒဏျရာတှနေဲ့ပဲ “Don Character “အတှကျ ပွနျပွီး ၊ ဝိတျတငျရပွနျပါတယျ ။
“Don “ဆိုတာ အာရှ Drug Market ကိုကြျောလှနျပွီး “Euro Drug Market “ကို အပိုငျသိမျးမဲ့ဇာတျရုပျဆိုတော့ Six -pack abs တှနေဲ့ ကွှကျသားသနျသနျမာမာ ၊ အကျရှငျစတနျ့တှကေို သကျတောငျ့သကျသာလုပျပွနိုငျတဲ့ အားကစားသမားတဈယောကျ ခန်ဓာကိုယျမြိုးရအောငျ Fitness Trainer Prashant Sawant ရဲ့ညှနျကွားခကျြအတိုငျးလကေ့ငျြ့ခဲ့ပွီး ၊
high protein diet plan အတိုငျး တဈနေ့ ကွကျဥဘယျနှဈလုံး ၊ ကွကျသားဘယျနှဈကီလို စသညျဖွငျ့ plan အတိုငျးလိုကျနာပွီး လကေ့ငျြ့ခဲ့တယျ ။ထုံးစံအတိုငျး စတနျ့တှကေိုတော့ လူစားမထိုးပဲ ရှာရှတျကိုယျတိုငျ ရိုကျခဲ့တယျ ။
(ပေ ၃၀၀ မွငျ့တဲ့ Park Inn Hotel အမိုးပျေါကနေ Alexander Platz ထိခုနျခတြာအပါအဝငျပေါ့)ဒီဇာတျကားအကျရှငျစတနျ့တှအေတှကျ ဟောလီးဝုဒျမှစတနျ့နဲ့တိုကျကှကျဒါရိုကျတာ Wolfgang Stegemann ကို နဲ့လကေ့ငျြ့ရိုကျကူးခဲ့တယျ ။
ပရီယာနျကာခြိုပရာလဲ အကျရှငျစတနျ့တှနေရောမှာ လူစားထိုးမှာကို ငွငျးပယျခဲ့ပွီး ၊ martial arts အခြို့ကို (၂)လကွာသငျကွားပွီးမှ ရိုကျကူးခဲ့တယျ ။Don -2 ရိုကျကှငျးကို ဂြာမနီမှာတညျဖို့ ရှာရှတျဟာ “Berlin International Film Festival “မှာ သူ့ဇာတျကား “My Name Is Khan ” ပွသကတညျးက သူ့ဖနျအားကိုသိရှိခဲ့လို့ ရှေးခယျြခဲ့တာဖွဈတယျ
ရှူတငျရိုကျဖို့ (၇၀)ကြျောသော Don-2 အဖှဲ့ဝငျတှေ ဟာ နှဈပတျကွိုပွီး ၊ ဂြာမနီမှာ ရိုကျကှငျးတှပွေငျဆငျနကေတညျးက ဂြာမနီအစိုးရဟာ သူတို့ရဲ့တရားဝငျ websites တှမှေတဆငျ့ ရှာရှတျဇာတျကားရိုကျကူးတော့မဲ့အကွောငျး ကွငွောတာတှေ လုပျခဲ့တယျ ။
တကယျရိုကျကူးတဲ့အခါမှာ Bradenburg Gate ,Alexander Pkatz, French Cathedral, East Gate အပါအဝငျဂြာမနီရဲ့အရေးကွီးတဲ့လမျးမတှကေို (၃)ပတျကွာ ရိုကျကူးရေးအတှကျ အနှောငျ့အယှကျမဖွဈရအောငျ ပိတျပေးခဲ့တယျ (ဒါမြိုးကို ဟောလီးဝုဒျဇာတျကားတှလောရိုကျတုနျးကတောငျ မလုပျပေးခဲ့ဖူးဘူးလို့ဆိုကွပါတယျ)
ဂြာမနီအစိုးရဟာ “Don 2″ရှာရှတျဂြာမနီမှာလာရိုကျပေးလို့ထုတျလုပျရေးကို ယူရို(၃)သနျး ပေးခဲ့တယျ ။ (SRK Magic)ပရီယာနျကာ ရှာရှတျကို ကားနဲ့လိုကျတဲ့အခနျးမှာ ကားပေါငျး(၆၇)စီး သုံးခဲ့ကာ ၎င်းငျးကားအားလုံးဟာ Korea မှ ဂြာမနီကိုပို့လိုကျတဲ့ Hyundai ကားမြားဖွဈကွပါတယျ ။
(ရှာရှတျဟာ Hyundai Brand Ambassador ဖွဈပါတယျ)ဒီအခနျးမှာ ရှာရှတျကားဟာ ကငျမရာကိုဝငျတိုကျမိသှားတာမို့ ရှာရှတျမှAction team ကို ခကျြခငျြးတောငျးပနျခဲ့ပွီး ၊ ပွငျဆငျဖို့ကုနျကခြံပေးခဲ့တယျ ။
ဂြာမနီဟာ Public မှာ ဆေးလိပျသောကျခွငျးကိုပွငျးပွငျးထနျထနျတားမွဈတဲ့နိုငျငံ ဖွဈပမေဲ့ ဂြာမနီမှာရှာရှတျရဲ့ရပေနျးစားမှုကွီးတာကွောငျ့ ဟိုတဲလျမှာ ဆေးလိပျသောကျခနျးအခြို့ကို ခှငျ့ပွုပေးခဲ့တယျ ။ဒါပမေဲ့ အိန်ဒိယကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနနဲ့ ငွိနပွေနျပါတယျ ။
သူကတော့ဆေးလိပျသောကျပွခနျးတှကေ ပရိုမိုးရှငျး လုပျနသေလိုမို့ မှငျစကျတို့ပါတဲ့ ။ ဒါရိုကျတာဖာရနျအကျချသာနဲ့ Sidwani ဟာ ဇာတျကောငျကို မှနျတယျလို့ ပွမှာမဟုတျတာကွောငျ့ ခှငျ့ပွုပေးဖို့ မနညျးတောငျးဆိုခဲ့ရတယျ ။
အဲ့နောကျ မလေးရှား Malacca Prison မှာ လုံခွုံရေးမွှငျ့ထားတဲ့ထောငျခနျးတဈခုမှာ ထောငျသားအခြို့နဲ့ ရိုကျကူးခဲ့တယျ ။အဲ့ဒီနောကျ ထုတျလုပျရေးဘကျက ပရိုမိုးရှငျးတှေ စတငျကတော့တယျဇာတျကားမှ ရှာရှတျဒိုငျယာလော့ဂျအလနျးအခြို့ကို ဆိုရှယျမီဒီယာ ၊TV, Radio တှကေနေ စလှငျ့ခဲ့တယျ ။
တဈဖနျ “SRK -Don -2″အရုပျတှကေို အကနျ့အသတျနဲ့ထုတျလုပျရောငျးခပြွီး ၊ ပရိုမိုးရှငျးလုပျပွနျတယျ ။(၂၀၁၁)အောကျတိုဘာမှာ “Don-2 :Comic Book;The Origin “(ကာတှနျးရုပျပွစာအုပျ) ထုတျပွီး ၊ ပရိုမိုးရှငျးလုပျပွနျတယျ။
တဈခါ ထုတျလုပျရေး “Excel Ent “မှ အိန်ဒိယအကွီးဆုံး “Video Game Company ,·Gameshastra “နဲ့ပေါငျးပွီး ၊ “Don-The Social Mobsters Game “ကို Launch လုပျခဲ့ပွနျတယျ ။
(အိန်ဒိယရုပျရှငျတဈခု Four Platforms မှာ ပရိုမိုးရှငျးလုပျတဲ့ ပထမဆုံးဇာတျကားဖွဈခဲ့တယျ)အဲ့ဒီနောကျ အိန်ဒိယမွို့ပေါငျးစုံ”Multi – City Tour Promotion “ကို တဈမွိူ့ဝငျတဈမွို့ထှကျ လုပျခဲ့တယျ ။ မြားပွားလှတဲ့ SRK Fans တှကွေောငျ့ Security အနနေဲ့ မနိုငျမနငျး ထိနျးမနိုငျသိမျးမရ ဖွဈခဲ့တော့တယျ ။
သီခငျြးအယျလျဘမျထှကျတော့ mix reviews ရခဲ့တယျ ။T-Series မှ Music Album Right ကို ဝယျယူခဲ့တယျ ။Don -2 ဟာ 2Dအနနေဲ့ရော 3D အနနေဲ့ပါ ပွသခဲ့တဲ့ဇာတျကားဖွဈတယျ ။3D ကို Avatar နဲ့ Sanctum တို့ရဲ့ S-3D innovator Chuck Comisky ကိုအပျခဲ့တယျ ။
Jason West က “Director of Photography “လုပျခဲ့တယျ ။Vfx ကို Pixion Studios မှ လုပျပေးခဲ့တယျ ။ဖွနျ့ခြီရေး Reliance Entertainment မှ Excel Ent မှ ဝယျယူခဲ့တယျ ။.Zee Entertainment Enterprise မှ Satellite Rights တှေ ဝယျယူခဲ့တယျ ။
ဒီဇာတျကားကို “Dubai International Film Festival “မှာအကွိုပှဲပွသခဲ့အပွီးမှာတော့ “Mc Donanld “နဲ့ “Cafe Coffee Day “နဲ့လကျတှဲပွီး ၊ မွို့ပေါငျး (၂၀)ရှိ ၎င်းငျးကဖေးစတိုးတှရှေိ ကှနျပြူတှမှော wi-fi free ပေးပွီး ၊ ဒီဇာတျကားကို 3-D နဲ့ ခံစားခှငျ့ရစတေယျ ။
ဇာတျကားရုံတငျတော့ အိန်ဒိယ ဝဖေနျရေးဆရာတှရေော နိုငျငံတကာဝဖေနျရေးဆရာတှဆေီကပါ ခြီးကြူးမှုတှေ ရခဲ့ပွီး ၊ Imbd rating -7.1Rotten Tomato -69% ရခဲ့ကာ“Highest Grossing Indian Film Of All Time List “ထဲက တဈကားအပါအဝငျဖွဈခဲ့တယျ ။
အဲ့ဒီနှဈအတှကျတော့ “3rd Highest grossing indian film “ဖွဈခဲ့တယျ ။ ဘတျဂတျြရူပီ (၈၅)ကုဋကေုနျကခြဲ့ပွီး ၊ ရူပီ (၂၇၅.၉၇)ကုဋပွေနျရခဲ့တယျ ။
“Excel Entertainment “နဲ့ “Red Chillies Ent “တို့လကျတှဲခဲ့တဲ့ “Don -2 “ဟာ (၉)နှဈပွညျ့ခဲ့ပါပွီ ။နောကျဆုံးအခနျးလေး SRK နဲ့ Lara တို့နှဈယောကျဆုံကွတဲ့အခနျးမှာ စီးလာတဲ့ SRK Bike ရဲ့ နံပါတျပွားမှာ “Don -3 “လို့ရေးထားတာ သတိထားမိကွလား?When is DON -3 coming?
နာမည်ကျော် ဘောလီးဝုဒ် မင်းသားကြီး ရှာရွတ်ခန်းပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Don 1 ရဲ.အဆက်ပါ။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်း နဲ့ မင်းသမီး Priyanka Chopra တို့အဓိက ပါဝင်ထားပြီးအခြားသရုပ်ဆောင်များစွာ အားဖြည့်ထားတဲ့ Bollywood Action ဇာတ်ကားပါ။
Action ချည်းသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းသဘောအရလဲ ဖမ်းစားထားနိုင်တာကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။IMDb Rating (7.1/10) ရရှိထားပါတယ်။
Don(2006) Box Office မှာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ပြီးနောက် ဒါရိုက်တာဖာရန်အက်ခ်သာဟာ (၂၀၀၇)မှာပဲ “Don Sequel “ကို ဆက်လက်ရိုက်ကူးမယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးစွာပဲ ရှာရွတ်ပခုံးဒဏ်ရာ surgery လုပ်ရတာမို့ မရိုက်ဖြစ်ပဲ အချိန်တစ်ခုကို ထပ်စောင့်နေခဲ့ရတယ် ။
အချိန်ကြန့်ကြာသွားပေမဲ့ ဒီ Cast ကိုပဲပြန်သုံးခဲ့ပြီး (Arjun Rample နဲ့ Ishaa Koppiker ကလွဲလို့) Lura Dutta ကိုတော့ ရှာရွတ်မှ recommend လုပ်တာကြောင့် ထည့်သုံးကာ ၂၀၁၀ မှာ ရိုက်ဖို့စတင်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
၂၀၁၀ ဆိုတာ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း “My Name Is Khan” အတွက် ဝိတ်ချလွန်းမက ချထားရလို့ သေးသေးပိန်ပိန်လေးဖြစ်နေရတဲ့အထဲ Surgery ထပ်လုပ်ထားရပြန်တဲ့အချိန် ။
နောက်ထပ်တစ်ခုက ၂၀၁၁မှာ ရုံတင်တာက “Ra One “နဲ့ “Don -2”Ra One Robot Suit အတွက် အဆင်ပြေအောက် ဝိတ်ချထားတဲ့ ရှာရွတ်ဟာ ခွဲစိတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲ “Don Character “အတွက် ပြန်ပြီး ၊ ဝိတ်တင်ရပြန်ပါတယ် ။
“Don “ဆိုတာ အာရှ Drug Market ကိုကျော်လွန်ပြီး “Euro Drug Market “ကို အပိုင်သိမ်းမဲ့ဇာတ်ရုပ်ဆိုတော့ Six -pack abs တွေနဲ့ ကြွက်သားသန်သန်မာမာ ၊ အက်ရှင်စတန့်တွေကို သက်တောင့်သက်သာလုပ်ပြနိုင်တဲ့ အားကစားသမားတစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်မျိုးရအောင် Fitness Trainer Prashant Sawant ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ၊
high protein diet plan အတိုင်း တစ်နေ့ ကြက်ဥဘယ်နှစ်လုံး ၊ ကြက်သားဘယ်နှစ်ကီလို စသည်ဖြင့် plan အတိုင်းလိုက်နာပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့တယ် ။ထုံးစံအတိုင်း စတန့်တွေကိုတော့ လူစားမထိုးပဲ ရှာရွတ်ကိုယ်တိုင် ရိုက်ခဲ့တယ် ။
(ပေ ၃၀၀ မြင့်တဲ့ Park Inn Hotel အမိုးပေါ်ကနေ Alexander Platz ထိခုန်ချတာအပါအဝင်ပေါ့)ဒီဇာတ်ကားအက်ရှင်စတန့်တွေအတွက် ဟောလီးဝုဒ်မှစတန့်နဲ့တိုက်ကွက်ဒါရိုက်တာ Wolfgang Stegemann ကို နဲ့လေ့ကျင့်ရိုက်ကူးခဲ့တယ် ။
ပရီယာန်ကာချိုပရာလဲ အက်ရှင်စတန့်တွေနေရာမှာ လူစားထိုးမှာကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ၊ martial arts အချို့ကို (၂)လကြာသင်ကြားပြီးမှ ရိုက်ကူးခဲ့တယ် ။Don -2 ရိုက်ကွင်းကို ဂျာမနီမှာတည်ဖို့ ရှာရွတ်ဟာ “Berlin International Film Festival “မှာ သူ့ဇာတ်ကား “My Name Is Khan ” ပြသကတည်းက သူ့ဖန်အားကိုသိရှိခဲ့လို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်
ရှူတင်ရိုက်ဖို့ (၇၀)ကျော်သော Don-2 အဖွဲ့ဝင်တွေ ဟာ နှစ်ပတ်ကြိုပြီး ၊ ဂျာမနီမှာ ရိုက်ကွင်းတွေပြင်ဆင်နေကတည်းက ဂျာမနီအစိုးရဟာ သူတို့ရဲ့တရားဝင် websites တွေမှတဆင့် ရှာရွတ်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးတော့မဲ့အကြောင်း ကြေငြာတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ။
တကယ်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ Bradenburg Gate ,Alexander Pkatz, French Cathedral, East Gate အပါအဝင်ဂျာမနီရဲ့အရေးကြီးတဲ့လမ်းမတွေကို (၃)ပတ်ကြာ ရိုက်ကူးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ရအောင် ပိတ်ပေးခဲ့တယ် (ဒါမျိုးကို ဟောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေလာရိုက်တုန်းကတောင် မလုပ်ပေးခဲ့ဖူးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်)
ဂျာမနီအစိုးရဟာ “Don 2″ရှာရွတ်ဂျာမနီမှာလာရိုက်ပေးလို့ထုတ်လုပ်ရေးကို ယူရို(၃)သန်း ပေးခဲ့တယ် ။ (SRK Magic)ပရီယာန်ကာ ရှာရွတ်ကို ကားနဲ့လိုက်တဲ့အခန်းမှာ ကားပေါင်း(၆၇)စီး သုံးခဲ့ကာ ၎င်းကားအားလုံးဟာ Korea မှ ဂျာမနီကိုပို့လိုက်တဲ့ Hyundai ကားများဖြစ်ကြပါတယ် ။
(ရှာရွတ်ဟာ Hyundai Brand Ambassador ဖြစ်ပါတယ်)ဒီအခန်းမှာ ရှာရွတ်ကားဟာ ကင်မရာကိုဝင်တိုက်မိသွားတာမို့ ရှာရွတ်မှAction team ကို ချက်ချင်းတောင်းပန်ခဲ့ပြီး ၊ ပြင်ဆင်ဖို့ကုန်ကျခံပေးခဲ့တယ် ။
ဂျာမနီဟာ Public မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပေမဲ့ ဂျာမနီမှာရှာရွတ်ရဲ့ရေပန်းစားမှုကြီးတာကြောင့် ဟိုတဲလ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခန်းအချို့ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ် ။ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ငြိနေပြန်ပါတယ် ။
သူကတော့ဆေးလိပ်သောက်ပြခန်းတွေက ပရိုမိုးရှင်း လုပ်နေသလိုမို့ မှင်စက်တို့ပါတဲ့ ။ ဒါရိုက်တာဖာရန်အက်ခ်သာနဲ့ Sidwani ဟာ ဇာတ်ကောင်ကို မှန်တယ်လို့ ပြမှာမဟုတ်တာကြောင့် ခွင့်ပြုပေးဖို့ မနည်းတောင်းဆိုခဲ့ရတယ် ။
အဲ့နောက် မလေးရှား Malacca Prison မှာ လုံခြုံရေးမြှင့်ထားတဲ့ထောင်ခန်းတစ်ခုမှာ ထောင်သားအချို့နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တယ် ။အဲ့ဒီနောက် ထုတ်လုပ်ရေးဘက်က ပရိုမိုးရှင်းတွေ စတင်ကတော့တယ်ဇာတ်ကားမှ ရှာရွတ်ဒိုင်ယာလော့ဂ်အလန်းအချို့ကို ဆိုရှယ်မီဒီယာ ၊TV, Radio တွေကနေ စလွှင့်ခဲ့တယ် ။
တစ်ဖန် “SRK -Don -2″အရုပ်တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး ၊ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပြန်တယ် ။(၂၀၁၁)အောက်တိုဘာမှာ “Don-2 :Comic Book;The Origin “(ကာတွန်းရုပ်ပြစာအုပ်) ထုတ်ပြီး ၊ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပြန်တယ်။
တစ်ခါ ထုတ်လုပ်ရေး “Excel Ent “မှ အိန္ဒိယအကြီးဆုံး “Video Game Company ,·Gameshastra “နဲ့ပေါင်းပြီး ၊ “Don-The Social Mobsters Game “ကို Launch လုပ်ခဲ့ပြန်တယ် ။
(အိန္ဒိယရုပ်ရှင်တစ်ခု Four Platforms မှာ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့ ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့တယ်)အဲ့ဒီနောက် အိန္ဒိယမြို့ပေါင်းစုံ”Multi – City Tour Promotion “ကို တစ်မြိူ့ဝင်တစ်မြို့ထွက် လုပ်ခဲ့တယ် ။ များပြားလှတဲ့ SRK Fans တွေကြောင့် Security အနေနဲ့ မနိုင်မနင်း ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်ခဲ့တော့တယ် ။
သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ထွက်တော့ mix reviews ရခဲ့တယ် ။T-Series မှ Music Album Right ကို ဝယ်ယူခဲ့တယ် ။Don -2 ဟာ 2Dအနေနဲ့ရော 3D အနေနဲ့ပါ ပြသခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တယ် ။3D ကို Avatar နဲ့ Sanctum တို့ရဲ့ S-3D innovator Chuck Comisky ကိုအပ်ခဲ့တယ် ။
Jason West က “Director of Photography “လုပ်ခဲ့တယ် ။Vfx ကို Pixion Studios မှ လုပ်ပေးခဲ့တယ် ။ဖြန့်ချီရေး Reliance Entertainment မှ Excel Ent မှ ဝယ်ယူခဲ့တယ် ။.Zee Entertainment Enterprise မှ Satellite Rights တွေ ဝယ်ယူခဲ့တယ် ။
ဒီဇာတ်ကားကို “Dubai International Film Festival “မှာအကြိုပွဲပြသခဲ့အပြီးမှာတော့ “Mc Donanld “နဲ့ “Cafe Coffee Day “နဲ့လက်တွဲပြီး ၊ မြို့ပေါင်း (၂၀)ရှိ ၎င်းကဖေးစတိုးတွေရှိ ကွန်ပျူတွေမှာ wi-fi free ပေးပြီး ၊ ဒီဇာတ်ကားကို 3-D နဲ့ ခံစားခွင့်ရစေတယ် ။
ဇာတ်ကားရုံတင်တော့ အိန္ဒိယ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရော နိုင်ငံတကာဝေဖန်ရေးဆရာတွေဆီကပါ ချီးကျူးမှုတွေ ရခဲ့ပြီး ၊ Imbd rating -7.1Rotten Tomato -69% ရခဲ့ကာ“Highest Grossing Indian Film Of All Time List “ထဲက တစ်ကားအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
အဲ့ဒီနှစ်အတွက်တော့ “3rd Highest grossing indian film “ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ဘတ်ဂျတ်ရူပီ (၈၅)ကုဋေကုန်ကျခဲ့ပြီး ၊ ရူပီ (၂၇၅.၉၇)ကုဋေပြန်ရခဲ့တယ် ။
“Excel Entertainment “နဲ့ “Red Chillies Ent “တို့လက်တွဲခဲ့တဲ့ “Don -2 “ဟာ (၉)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ ။နောက်ဆုံးအခန်းလေး SRK နဲ့ Lara တို့နှစ်ယောက်ဆုံကြတဲ့အခန်းမှာ စီးလာတဲ့ SRK Bike ရဲ့ နံပါတ်ပြားမှာ “Don -3 “လို့ရေးထားတာ သတိထားမိကြလား?When is DON -3 coming?
Godzilla vs. Kong – Link 2